3 Best Saffarada Day From Budapest By tareenka | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 3 Best Saffarada Day From Budapest By tareenka
Sidaas daraaddeed aad ugu dambeyntii u sameeyeen. Waad gelisay fasaxaaga shaqada, tigidhada ka iibsadeen diyaarad iyo madax si Hungary fasax ay u qalmeen. Oo intuu in ay si fiican oo wanaagsan oo dhan – ka dib oo dhan, Budapest waa magaalo qurux badan – ma naftaada gaaban iibin by kaliya dusin agagaarka caasimadda. Europe waa qaarad si fiican u xiran kumanyaal doorasho ee safarka tareenka, iyo waxaa ka mid ah Hungary. Sidaas mar aad soo aragnay Qubeyska waxa kulul Szechenyi oo ku riyaaqay pint a at Spa Beer ah, madax ka mid ah magaalada ka mid ah, kuwaas oo 3 ugu fiican safarada maalin Budapest tareen.
magaalada labaad ee ugu weyn ee Hungary iyo sidoo kale loo yaqaan Capital reer Hungarian Great Bannaankii, magaaladan nool hoy u tahay 200,000 dadka. Taariikhi ah oo qurux badan, Debrecen waa kaliya 2 saacadood oo 15 daqiiqo ka Budapest tareen. Its dhow this musharax ku wanaagsan maalin Budapest safarada tareen ka dhigaysa.
Church Great ee Debrecen waa dhibic focal magaalada, iyo hawlaha sida calaamad u ah Protestant ee Hungary. Sidoo kale waxaa jira matxafyada badan oo si aad u booqato, sida Museum Sheykh ah, oo qaar ka mid ah xubnihii taariikhi ah ugu yaala oo dhan Hungary.
Ha illoobin in ay isku dayaan qaar ka mid ah cuntada deegaanka iyo khamri, sidoo. Haddii aad tahay sommelier run ah, waxaad dooran kartaa “Bikaner”, a khamri gudaha laga soo saaro in tarjumayaa in “dhiigga dibiga ee”. Waxaa la soo saaray ee Hungary, ee caanka ah 'Valley ee Beautiful Women' gobolka. yum!
Haddii aad tahay taageere ka mid ah bad kaamerada, Debrecen sidoo kale ayaa kugu daboolay. In ka tagay ka dhaqan, Aquaticum Spa waxay u egtahay gudaha biyo park. Soo bandhigtay a saqafka domed sare iyo bogagga biyo midabo, qubaysyadan kuleylka ahi waxay u yihiin farxad qoyska oo dhan.
2. Best Saffarada Day Budapest By tareenka: Vienna, Austria
Waayo, kanu entry xiga ee Budapest maalin safarada tareen, waxaan ka tagay Hungary gebi iyo jeeda Austria, deriskiisa galbeedka Hungary ee. Caasimadda ah ee Austria, Vienna waa magaalo qurux badan iyo hoy u tahay in ka badan 2 milyan oo deggan. Sida badan ee Hungary, Vienna sidoo kale ku taalaa Danube. Si ka duwan magaalada yar, si kastaba ha ahaatee, Vienna waxaa ka buuxa ka buuxa xaafadaha kala duwan, matxafyada, soo jiidashada, iyo noocyo ka mid ah cuntada.
Loo yaqaan xarun ka mid ah dhaqanka iyo farshaxanka, sidoo kale waxay ku ciyaartaa goob qaxwaha kobcaya waxaadna ka heli doontaa boqollaal maqaaxiyo oo ku teedsan dariiqyadeeda wareegaya. Vienna sidoo kale hoy u tahay Schonbrunn, degitaanka xagaaga ee Hapsburgs iyo mid ka mid ah dhismayaal waaweyn oo waaweyn oo ku yaal magaalada oo dhan.
Haddii aad u socoto ee xilliga qaboobaha, Vienna waa waajib-stop ah ee ay suuqyada Christmas. Kuwani suuqyada fantastical waa gaaban waxba sixir la Laabideeda nalalka cirfiid, khamri mulled kulul, iyo cunto diiran raaxada.
Inkastoo safarka dheer yahay safarka maalinta ka Budapest via tareenka, waxaa jira fursado si dhakhso ah oo lagu heli karaa fursadaha aan joogsan. xitaa wanaagsan, waxaad heli doontaa si aad u hubiso dal kale oo Yurub off aad liiska baaldi.
Budapest in Tareenadu Vienna
3. Best Saffarada Day Budapest By tareenka: Wiener Neustadt, Austria
Ugu dambeyntii, waxaan u timid inaad naga soo galo ee la soo dhaafay, Magaalo mid dhexdhexaad ku yaalla koonfurta Vienna. Haa, waa sax, waxaan ku daray safar kale maalin Austria liiska this. Waa maxay sababta ay in? Waa hagaag, sababtoo ah Wiener Neustadt (gees uga leexan doontaan isagoo magac kaftan ah), waa magaalo ku nool yihiin ku dhowaad 50,000 dadka, waana la helay dhamaanteed marka la eego waxyaabaha la qabanayo.
Waxay ku taallaa kaliya 30km ka Vienna iyo aad u dhow xadka Hungarian-Austria waa safar maalin Budapest kaamil tareen, taariikhda magaalada this ee waa gaad la dagaalo xakamaynta ka Rayaale kala duwan. Inkastoo dagaalo kuwan- ama laga yaabee sababtoo ah iyaga ka mid ah – Wiener Neustadt wuxuu u xuubsiibtay goob tababar millatari oo muhiim ah iyadoo la dhisey Akadamiyadda Milatariga Maria Theresa ee 1700s.
Tegaayo ka danbeeya la soo dhaafay, maanta Wiener Neustadt hoy u tahay hawlo badan oo kala duwan, oo ay ku jiraan badan oo socodka banaanka iyo beeraha. Waxaad booqan kartaa Myra Falls qaar ka mid ah socodka heer sare ah, ama u jiheysan Gesaeuse National Park si ay u qaataan hawada cusub.
Waxaa kaloo magaalada taxadiri badan, matxafyada, iyo balbalooyinkii heegan u muujinaysa taariikhda magaalada. Haddii waxaas oo dhan dhawaaqa jeclaan kugu badan yihiin – ha ka welwelin. Ka dib markii maalin dhan ah hawlaha u jiheysan Therme Linsberg Asia ee Spa waayo fursad ay hoos u qaboojiso (ama is kululeeyo!) iyo nasato.
Budapest in Wiener Neustadt
Vienna si Wiener Neustadt
Prague in Wiener Neustadt
Mawduuca Bonus: Prague
caasimada Czech waa yara fog safarada maalin Budapest tareen laakiin magaaladan waa in aan la seegay. Taasi waa haddii aad ku jeclahay taariikhda, naqshadaha, cuntada, iyo cabitaanada. Inkasta oo ay tahay ku dhawaad 8 saacadood tareen ka Budapest, haddii aad cinwaanka sidan waa fikrad fiican ah in safarka via Vienna (aad u ogaato, in magaalada laga cabsado aynu kor ku xusan).
Guud ahaan aan qaali ahayn oo waxaa ka buuxda dhismayaasha qadiimka ah, square ah iyo sidoo kale-dhawray Dr Makumbe, iyo qalliinka ee dunida ugu da'da weyn ah sumalka uguma Clock, Prague waa waajib-samayn on your fasax Yurub. Qaado gaabis halkan oo wuxuu ku raaxaysan strolling guud ahaan Charles Bridge, dhamaystiray 1402. Ama xitaa ka fiican, gasho lebiskaaga boqornimo ee ugu wanaagsan uguna tag Vysehrad maalinta si aad u hubiso burburka qadiimiga ah ee qalcaddii hore..
maalin Budapest safarada tareen iyo Budapest waa magaalo la yaab leh in ay booqasho. From kaguuraya qurux badan si ay u bad ay kaamerada caan, magaalada ma aha mid ka maqnaan doona. Laakiin adigu ku Mannaysanno iyo madax ka baxay kasta hal jeer in muddo ah si ay u sahamiyaan qaar ka mid ah oo Sixira badan oo maxali ah naftaada. Haddii aad cabaya khamriga dhiigga qaar ka mid ah dibi ama gefo off wadan cusub wadajir, arki indhaha ku saabsan vacation.
Mid ka mid ah hababka ugu fiican in la sameeyo safar maalin Budapest tareen – raaxaystaan ​​habboonaan iyo badbaadada safarka tareen iyo isticmaalka Save A tareenka!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “3 Best Saffarada Day Budapest By tareenka” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-budapest-day-trips-train%2F%3Flang%3Dso የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / PL inay / de ama / es iyo luuqado badan.
#daytrip #traveleurope Budapest Daytrips tareen safarka TravelBudapest SafarkaPrague TravelVienna